စတိဗ်ဂျော့ဘ် ရဲ့ မလျှို့ဝှက်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၄၀) - Software Guide
Home / ဗဟုတုတ / စတိဗ်ဂျော့ဘ် ရဲ့ မလျှို့ဝှက်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၄၀)
စတိဗ်ဂျော့ဘ် ရဲ့ မလျှို့ဝှက်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၄၀)
စတိဗ်ဂျော့ဘ် ဟာ Apple ကုမ္ပဏီ ကို တည်ထောင်ခဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး နည်းပညာလောက ရဲ့ တီထွင်ပညာရှင်တစ်ဦး အဖြစ်လည်း အားလုံး က အသိအမှတ်ပြုထားကြပါတယ်။ စတိဗ်ဂျော့ဘ် တီထွင်ခဲ့သမျှ နဲ့ ကြံစည်စိတ်ကူးသမျှ အားလုံး ဟာ ခေတ်သစ် နည်းပညာလောက ကို အပြောင်းအလဲ ကြီးမားစွာ အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖြစ်စေခဲ့ပြီး လက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့ နည်းပညာ ထုတ်ကုန် အတော်တော်များများ ဟာ စတိဗ်ဂျော့ဘ် စိတ်ကူးတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်မဟုတ်တောင်မှ သွယ်ဝိုက်ပတ်သက်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ။ အခု ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကတော့ စတိဗ်ဂျော့ဘ် ရဲ့ မလျှို့ဝှက်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကလေးတွေလို့ ဆိုရင်လည်း မမှားနိုင်ပါဘူး ခင်ဗျာ။
1. သူရဲ့ မူရင်း အမည်နာမ ဟာ Steven Paul Jobs ဖြစ်ပါတယ်။
2. စတိဗ်ဂျော့ဘ် ဟာ မွေးပြီးပြီးချင်း မိဘတွေရဲ့ စွန့်ပစ်မှု ကို ခံခဲ့ရတဲ့ စွန့်ပယ်ခံ သားတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
3. ဇီဝဗေဒ စစ်ချက် နဲ့ စတိဗ်ဂျော့ဘ် ရဲ့ DNA ကို စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာ သူဟာ အာရပ်သွေး တစ်ဝက်ပါရှိတယ် လို့ သိရပါတယ်။ သူရဲ့ ဖခင် ဟာ ဆီးရီးယားလူမျိုး ဖြစ်ပြီး မိခင်ဖြစ်သူကတော့ အမေရိကန်လူမျိုး ဖြစ်တဲ့အကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။
4. နောင်တစ်ချိန်မှာ Apple ကို ပူးတွဲတည်ထောင်မယ့်သူ ဖြစ်လာတဲ့ စတိဗ်ဝါးနော့နဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသား ဘ၀ က တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အဲဒီအချိန်မှာ ၀ါးနော့ခ် ဟာ အသက် ၁၈ နှစ် အရွယ် နဲ့ စတိဗ်ဂျော့ဘ် ဟာ ၁၃ နှစ် အရွယ် ရှိခဲ့ပါပြီ။
5. စတိဗ်ဂျော့ဘ် ဟာ သက်သတ်လွတ်သမား ဖြစ်ပြီး သူ ဟာ ခြွင်းချက်အနေနဲ့ အသား မစားပေမယ့် ငါးတစ်မျိုးကိုတော့ စွဲစွဲမြဲမြဲ စားလေ့ရှိပါတယ်။
6. သူ ဟာ ကောလိပ်တစ်ပိုင်းတစ နဲ့ ကျောင်းထွက်ခဲ့တယ် ဆိုပေမယ့် ညနေပိုင်းမှာ ဖွင့်တဲ့ အသံပိုင်းစမ်းသပ်မှုပညာရပ်ဆိုင်ရာ အပါအ၀င်သင်တန်းငယ်ကလေးတချို့ကိုတော့ ပြန်လည် အချိန်ပေးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
7. တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ပိုင်း သင်တန်းငယ်ကလေးတွေထဲက တစ်ခု ဟာ လက်ရေးတို သင်တန်း ဖြစ်ခဲ့ပြီး နောင်မှာ Apple ထုတ်ကုန်တွေထဲမှာ Typography နဲ့ Apple ကိုယ်ပိုင် ဖောင့်တွေ အတွက် အများကြီး အထောက်အကူ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
8. သင်တန်းတွေက ထွက်ခွာလာပြီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ အိန္ဒိယ တိုက် တစ်ခု လုံး လှည့်ပတ်သွားလာခဲ့ပြီး စိတ်ကြွစေတဲ့ ဆေးတချို့ကို သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ သိတ်မကြာခင်မှာပဲ အဲဒီ အမူအကျင့်ဆိုးတွေကို ဇင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကနေ ရရှိလာတဲ့ သမထ သဘောတရားတွေ ကို လေ့ကျင့်ရင်း ခြေဖျက်ပစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
9. စတိဗ်ဝါးနော့ နဲ့ အတူတူ အလုပ်စတင်လုပ်ကိုင်ရင်း ပထမဆုံး ထုတ်ကုန် ဖြစ်တဲ့ Atari ဂိမ်းကို မူပိုင်ခွင့် ပုတ်ပြတ် ၊ နှုန်းကြေး ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ နဲ့ ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ မူလ က ပါတနာဖြစ်ခဲ့သူ စတိဗ်ဝါးနော့နဲ့ သဘောတူညီချက် အရ အဲဒီဂိမ်းရောင်းချငွေ ကနေ တစ်ယောက် ကို ရှယ်ယာ တစ်ယောက်တစ်ဝက် (၅၀- ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း) ဖြင့် ရှင်းပေးမယ် လို့ ဆိုခဲ့ပေမယ့် စတိဗ်ဝါးနော့ကို ဂိမ်းရောင်းချငွေ က ရတဲ့အမြတ်ဟာ ဒေါ်လာ ၇၀၀ သာ ရရှိခဲ့တယ် လို့ လိမ်လည်ခဲ့ပြီး တစ်ဝက်နှုန်းထားဖြစ်တဲ့ ဒေါ်လာ ၃၅၀ ကို သာ စာရင်းရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့ အိတ်ကပ်ထဲကို အသားတင်အမြတ်ငွေ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၄၆၅၀ ရယူသွားခဲ့ပါတယ်။
10. Apple ရဲ့ တတိယ နဲ့ နောက်တိုး တည်ထောင်သူ ဖြစ်တဲ့ Ronal Wayne က Apple ရဲ့ ပထမဆုံး လိုဂို ကို ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ (ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ထူးခြားတဲ့ ပန်းသီး သုံးလုံးဆိုတာ ဟာ အာဒမ်၊ဧ၀ ဇာတ်လမ်းထဲ ပန်းသီး ၊ အိုင်ဆက်နယူတန် နဲ့ မြေဆွဲအားထဲ က ပန်းသီး နဲ့ Apple ကုမ္ပဏီ ရဲ့ ပန်းသီး ကို တင်စားခေါ်ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။) အဲဒီ လိုဂိုထဲမှာတော့ အိုင်ဆက်နယူတန် နဲ့ ပန်းသီးပင် ပုံ ပါဝင်တဲ့ အဖြူ၊ အမည်း လိုဂိုဒီဇိုင်း တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းနာ Ronal Wayne ဟာ သူတို့နဲ့ မိတ်ဆွေဖွဲ့ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး နှစ်ပတ်အကြာမှာပဲ သူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အထဲက( Apple ကုမ္ပဏီ ရဲ့) ရှယ်ယာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ကို ဂျော့ဘ် နဲ့ ၀ါးနော့ကို ဒေါ်လာ ၈၀၀ နဲ့ ပြန်လည်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။
11. ပထမဆုံး Apple I ကို ဒေါ်လာ ၆၆၆ နဲ့ စတင်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။
12. (ဦးဆောင်သူ စတိဗ်ဂျော့ဘ် ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ က ဈေးနှုန်း အဆမတန် ကြီးမြင့်ပြီး ဈေးကွက်မှာလည်း အမြတ်အစွန်း နည်းပါးတဲ့အပြင် လူကြိုက်နည်းခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် နဲ့ ) 1985 ခုနှစ်မှာ သူ တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Apple ကုမ္ပဏီ က အလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ 1997 ခုနှစ်မှာ Apple ရဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် အဖြစ် ပြန်လည်ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ (Apple ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ က ဈေးနှုန်း အဆမတန် ကြီးမြင့်ပြီး ဈေးကွက်မှာလည်း အမြတ်အစွန်း နည်းပါးတဲ့အပြင် လူကြိုက်နည်းနေတဲ့အတွက် မှန်ကန်တဲ့ ဦးဆောင်သူ တစ်ဦး လိုအပ်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် နဲ့ ပဲ ပြန်လည်ခန့်အပ်ခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ )
13. ဂျော့ဘ် အသက် ၂၃ နှစ် အရွယ်မှာ သူ ကိုယ်တိုင် အသိအမှတ်မပြုတဲ့ ကလေးငယ်တစ်ဦး မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ အတူနေချစ်သူ Chris-Ann Brennan နဲ့ ရရှိတဲ့ Lisa Brennan လို့ ခေါ်တဲ့ အဲဒီ ကလေးမလေး ကို ပထမပိုင်း ဂျော့ဘ် ဟာ အသိအမှတ်မပြုခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ တော်တော်လေး ချစ်သွားခဲ့ပြီး ကလေးငယ်ရဲ့ အမည်နောက်မှာ သူရဲ့ အမည်အဖြစ် Lisa Brenan-Jobs လို့ တရားဝင် ပြောင်းလဲပေးခဲ့ပါတယ်။
14. မိဘနှစ်ဦး ရဲ့ စွန့်ပစ်ခံ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စတိဗ်ဂျော့ဘ် ဟာ သမီးငယ် လီဆာ မွေးဖွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မိသားစု အတွေးအမြင် အနည်းငယ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီး သူရဲ့ ပရောဂျက်အသစ်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Apple ကွန်ပျူတာ အသစ် ကို Lisa ကို အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကံအကြောင်းတိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ပဲ အဲဒီ Lisa ကွန်ပျူတာ ဟာ မအောင်မမြင် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အပြင် နောက်ပိုင်းမှာလည်း ဌာနပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်ခံသူတွေနဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိတွေရဲ့ ချောင်ထိုးထားခြင်း ခံရတဲ့ (စွန့်ပယ်ခံ) ပရောဂျက်တစ်ခု လည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
15. 1980 ခုနှစ်တွေအတွင်းမှာ Adobe Systems ကို သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး Adobe Co-founder Charles Geschke ကို Apple ကုမ္ပဏီ မှာ အလုပ်လာလုပ်ဖို့ သွားရောက်စည်းရုံးခဲ့ပေမယ့် Charles Geschke က ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ Apple နဲ့ Adobe ဟာ ခင်မင်ရင်းနှီးမှု အတိုင်းအတာ ကြီးမားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေအတွက Adobe က Flash ကို အဆင့်မြှင့်တင်ပေးလိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ သူရဲ့ ရှားရှားပါးပါး မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ကို ပြန်လည်မေ့ပစ်ခဲ့ပါတယ်။
16. Apple မှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်းမှာ သူရဲ့ လစာ ဟာ (၁) ဒေါ်လာ မျှသာဖြစ်ခဲ့ပြီး သူဟာ Apple က ရရှိခဲ့တဲ့ ရှယ်ယာတွေနဲ့သာ နေထိုင်ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ သူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Pixar Animation Studio ကို Disney ကုမ္ပဏီ ကို ရောင်းချခဲ့ပြီး အချိန်မှာတော့ သူရဲ့ ၀င်ငွေ ဟာ မခန့်မှန်းနိုင်လောက်အောင် ကြွယ်ဝလာခဲ့ပါတယ်။
17. မျိုးရိုးစစ်ချက် အရ တော်စပ်ရတဲ့ ညီမ ၀မ်းကွဲကတော့ Mona Simpson ဖြစ်ခဲ့ပြီး ညီမ မိုနာ နဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် နေခဲ့ရတဲ့ အချိန်များစွာရှိခဲ့ဖူးပြီး စတိဗ်ဂျော့ဘ် စိတ်ကူးယှဉ်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင် ဖြစ်ဖို့အထိ တော်တော်လေး နီးစပ်ခဲ့ပါတယ်။
18. မိုနာ ရဲ့ ၀တ္ထုတစ်အုပ်ကို အခြေံခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Anywhere But Here ဟာ ဂျော့ဘ် ရဲ့ ဘ၀ အစစ်အမှန်ကို တစိတ်တပိုင်း မီးမောင်းထိုးပြခဲ့တယ် လို့ အတွင်းစကားတွေ က ဆိုပါတယ်။
19. ၁၉၉၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာ Yosemite National Park မှာ Laurene Powell နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။
20. ဂျော့ဘ် ဟာ ပရဟိတ နဲ့ အများအကျိုးအတွက် ပြုလုပ်တဲ့ လှူဒါန်းမှုတွေကို ပြုလုပ်လေ့မရှိသူ တစ်ဦး လို့ နာမည်ကြီးပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကုမ္ပဏီ ရဲ့ ပရဟိတ ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု ကို Apple အတွက် ဘာမှ ပြန်ရလာနိုင်စရာ မရှိဘူး ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်မရှိပဲ ငြင်းပယ်ခဲ့တဲ့ အတွက်ပါပဲ။
21. စိတ်လှုပ်ရှားမှုများ ၊ စိတ်ခံစားမှုများ နဲ့ လူတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူတွေအပေါ်ကို လေ့လာကြဖို့ သူရဲ့ ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ Apple Team ကို အမြဲလို ညွှန်ကြားလေ့ရှိပြီး အဲဒီ ညွှန်ကြားချက်တွေကနေတဆင့် လူတစ်ကိုယ်စာ လိုအပ်ချက် ဖြစ်တဲ့ သီချင်းနားထောင်ခြင်း
(iPod) နဲ့ ဆက်သွယ်ရေး (iPhone) တို့ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
22. ဂျော့ဘ် ဟာ အတ္တကြီးမားသူ တစ်ယောက် အဖြစ်လည်း လူသိများပါတယ်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာတော့ အမေရိက ရဲ့ အမာကြောဆုံး ခေါင်းဆောင်များ အဖြစ် Fortune မဂ္ဂဇင်း ရဲ့ မျက်နှာဖုံး က ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။
23. ဂျော့ဘ် ဟာ မီဒီယာ သတင်း ၊ စာနယ်ဇင်း လောက နဲ့လည်း ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မရှိတဲ့ အပြင် အလိုက်သင့်အလျားသင့် နေထိုင်တတ်သူတစ်ဦးလည်း မဟုတ်ခဲ့ပါ။ Apple ထုတ်ကုန်တွေကို ခန့်မှန်းပြီး သတင်းရေးသားလေ့ရှိတဲ့ Think Secret Blog ၀က်ဘ်ဆိုဒ် ပိုင်ရှင် လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်သူ Nicholas Ciarelli ကို ကုမ္ပဏီ ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်များ အက်ဥပဒေ ဖြင့် တရားစွဲခဲ့ဖူးပါတယ်။
24. ဂျော့ဘ် ဟာ တီထွင်သူ၊ ပူးတွဲတီထွင်သူ စတဲ့ ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုး နဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံမှာ မူပိုင်ခွင့်ပေါင်း ၃၄၆ ခု အထိ မှတ်ပုံတင်ထားသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး တီထွင်သူတစ်ယောက် အတွက် အများဆုံးမူပိုင်ခွင့် စာရင်း ရှိသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
25. ဂျော့ဘ် ဟာ Joan Baez နဲ့ Diane Keaton တို့နဲ့ စိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
26. Apple ပူးတွဲတည်ထောင်သူ စတိဗ်ဝါးနော့ အဆိုအရ ဂျော့ဘ် ဟာ Code ၊ Coding တွေကို ဘယ်တော့မှ လေ့လာခဲ့သူတစ်ဦး မဟုတ်ဘူး လို့ ဆိုပါတယ်။
27. အမေရိကန်သမ္မတ ဘီလ်ကလင်တန် က အိမ်ဖြူတော် ရဲ့ လင်ကွန်းဆောင် အိပ်ခန်းမှာ တစ်ညတာ အချိန်ဖြုန်း အိပ်စက်ဖို့ ပင့်ဖိတ်ခေါ်ခံခဲ့ရဖူးတဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
28. Fortune မဂ္ဂဇင်း ရဲ့ အမေရိက ထာဝရအကောင်းဆုံး ကုမ္ပဏီများ စာရင်းမှာ အမှတ်စဉ် (၁) မှာ နေရာယူထားခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီ ဟာ စတိဗ်ဂျော့ဘ် ရဲ့ apple ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါတယ်။
29. Personal Computer လို့ ခေါ်တဲ့ IBM အနွယ်ဝင် PC တွေကို မုန်းတီးလှသူတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး “PC တွေကို ရောင်းမဲ့အစား ခွေးချေးတွေကိုပဲ ရောင်းတော့မယ်” လို့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ကို ပြောကြားခဲ့ဖူးပါတယ်.။
30. ကွန်ပျူတာပညာရှင် စတိဗ်ဂျော့ဘ် ဟာ ကွယ်လွန်ချိန်အထိ မော်တော်ကားကို နံပါတ်ပြားမပါပဲ စီးနင်းခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ မာစီဒီး SL55 AMG မှာ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ လိုင်စင်နံပါတ် အပါအ၀င် ဘာနံပါတ် မှ ရေးဆွဲထားခြင်း မရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ ခြွင်းချက် ကို ပြောပြရရင် ကာလီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်ဥပဒေ က ကားအသစ်တစ်စီး ၀ယ်ယူပြီး ပထမဆုံး ခြောက်လအတွင်းမှာ ကားအသစ်ကို မှတ်ပုံတင်နံပါတ် ရေးထိုးမထားခြင်း ကို ခွင့်ပြုပါတယ်။ စတိဗ်ဂျော့ဘ် ဟာ ခြောက်လပြည့်မြောက်စဉ်တိုင်းမှာ နောက်ထပ်ကားအသစ်တစ်စီးကို ၀ယ်ယူအစားထိုးလေ့ရှိတဲ့အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
31. ဂျော့ဘ် ဟာ သူ့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို အဖြူရောင် သုံးစွဲထားတာ ကို ဘယ်တော့မှ ကြိုက်လေ့ရှိသူ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် သူရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ IPhone,IPod တွေမှာ ရှိတဲ့ အရောင်ဟာ အဖြူဆွတ်ဆွတ် အရောင်မဟုတ်ပဲ “လငပုပ်ဖမ်းတဲ့အခါဖြစ်တဲ့အရောင်” Moon Gray လို့ ခေါ်တဲ့ ဘော်ငွေရောင်ကိုသာ သုံးစွဲလေ့ရှိပါတယ်။
32. ပူးတွဲတည်ထောင်သူ စတိဗ်ဝါးနော့ဟာ ၁၉၈၇ ခုနှစ်မှာ Apple က အလုပ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုမ္ပဏီ က ၀ါးနော့ ကို နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ ၁၂၀၀၀၀ လစာငွေ ကို ယခုအချိန်အထိ ပေးအပ်ရလေ့ရှိပြီး စတိဗ်ဝါးနော့ ရဲ့ ကုမ္ပဏီပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးဆောင်ခဲ့မှုတွေ အတွက် လို့ ဆိုပါတယ်။
33. အော်ရီဂျင်နယ် Macintosh ကွန့်ပျူတာတိုင်းမှာ စတိဗ်ဂျော့ဘ် ရဲ့ လက်မှတ်ရေးထိုးထားတာ ရှိပါတယ်။
34. သူဟာ ဂူးဂဲလ်ကို စတင်တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ Segey Brin နဲ့ Larry Page ကို အတော်လေး လေးစားခဲ့ပြီး နည်းပညာ Sharing ကိစ္စ မှန်သမျှကို Google နဲ့ လုပ်ဆောင်သွားဖို့ သူရဲ့ အကြီးတန်းအရာရှိတွေကို မှာကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။
35. Google က Apple ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ အပြိုင် Andriod ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ စတိဗ်ဂျော့ဘ် ဟာ Google ကို ရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။
36. ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ ပန်ခရိယ ကင်ဆာ ဖြစ်တာ ကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ပထဆုံး အကြိမ် ခွဲစိတ်မှု အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
37. ပထမဆုံးအကြိမ် ပန်ခရိယကင်ဆာ ခွဲစိတ်မှု အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ကိုးလ အကြာမှာတော့ သူ ရဲ့ အဓိက သွေးကြောမကြီးတွေအတွင်းမှာ ပန်ခရိယဆဲလ်တွေ အဆမတန် ပျံ့နှံ့နေတာ သိရှိခဲ့ပြီးနောက် ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင် ခန်းမ မှာ ဘွဲ့ယူကျောင်းသားတွေကို စကားပြောဆိုရင်း ကမ္ဘာကြီး ကို နောက်ဆုံးအကြိမ် နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတော့တယ်။
38. Apple ကုမ္ပဏီ နဲ့ သူရဲ့ မိတ်ဖက် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်တဲ့ ဒစ္စနေး ကုမ္ပဏီ အပါအ၀င် ပြိုင်ဘက် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်တဲ့ Microsoft ကုမ္ပဏီ တို့က သူသေဆုံးသွားတဲ့အချိန် မှာ ကုမ္ပဏီ ရဲ့ အလံတွေကို တစ်ဝက် အောက်ချ ပြီး သူ့ကို ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
39. “ Oh wow, Oh wow, Oh wow” ဆိုတဲ့ စကားသံတွေဟာ ဆေးရုံပေါ်မှာ သေလုမျောပါး ခံစားနေရတဲ့ သူရဲ့ နောက်ဆုံး ညည်းတွားရေရွတ်ခဲ့တဲ့ အသံတွေပါပဲ။
40. ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ် အစိုးရ က နှစ်စဉ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နေ့ကို စတိဗ်ဂျော့ဘ် နေ့ အဖြစ် သတ်မှတ်ဂုဏ်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။